နားနဲ့ မနာ ဖ၀ါးနဲ့ နာစေလိုပါတယ်..။ လူကြပ်တဲ့ ရန်ကုန် လိုင်းကာပေါ်မှာ အ၀ါလုပ်တဲ့ အဖြစ်အပျက် - APANNPYAY
Home / ဖြစ်ရပ်မှန် / နားနဲ့ မနာ ဖ၀ါးနဲ့ နာစေလိုပါတယ်..။ လူကြပ်တဲ့ ရန်ကုန် လိုင်းကာပေါ်မှာ အ၀ါလုပ်တဲ့ အဖြစ်အပျက်
နားနဲ့ မနာ ဖ၀ါးနဲ့ နာစေလိုပါတယ်..။ လူကြပ်တဲ့ ရန်ကုန် လိုင်းကာပေါ်မှာ အ၀ါလုပ်တဲ့ အဖြစ်အပျက်
Apann Pyay 3:02 PM ဖြစ်ရပ်မှန် Edit
နားနဲ့ မနာ ဖဝါးနဲ့ နာစေလိုပါတယ်! ဒီနေ့ အိမြတ် Baahubali ကို စံရိပ်င်ြမ် ဂမုန်းးပွင့်မှာ ကြည့်ပီးး အပြန်မှာ! စံရိပ်ငြိမ် မှတ်တိုင်မှာ Bus Car စောင့်နေပါတယ် ။ အရင်က ကျောင်းဆင်းရင် ဖေဖေလာကြိုပေမဲ့ ဒီနေ့တော့ လျှာရှည်ပီး ကိုယ့် ဘာသာ ပြန်မယ်ဆိုပီးး Bus ကားစောင့်နေပါတယ်!အဲ့မှာ လူတယောက်က အနောက်ကပါလာတယ်!လူပုံက သန့်သန့်ပါပဲ! အသက်တော့ 30 လောက်ရှိမယ်ထင်ပါတယ်! ကိုယ်ကတော့ ကားစောင့်နေတဲ့ သူထင်ပီး ကားးပဲ မျှော်နေတာ!သူ့ကိုလဲ သတိမထားမိပါဖူး!ကားကလဲ တော်တော်နဲ့မလာတော့4ခွဲလောက်မှ ကားရပါတယ်! အဲ့မှာ အိမြတ်က ကားပေါ်တက်ပီးး ကိုယ်က ခုံရ တာ မို့ အေးအေးဆေးဆေးပါပဲ!အဲ့လူပါလာတာလဲ သတိမထားမိပါဖူးး! ဘူတာရုံလမ်းးနားကျတော့ ကလေး အမေသားးအမိ တက်လာပါတယ်! လူတွေက ကျပ် နေရာကမရမို့! အိမြတ်က နေရာက ဖယ်ပေးလိုက်ပါတယ်!ကိုယ်ကလဲ အိတ်က တစ်ဖက် ဖိုင်ကတစ်ဖက် ထီးကတစ်ဖက်မို့! ကိုယ့်အနောက်က ကပ်နေတာ ယောက်ျားလား မိန်းး မလားလဲ မသိပါဖူးး ကိုယ်က လေးဖက်နာဖြစ်ကတည်းးက လက်က မသန်တာမို့ အပေါ်က တန်းးကို ကိုင်ရင်လဲ မမြဲပါဖူး! 😞 ဒါကြောင့် မှတ်တိုင်တစ်ခုရပ်မယ်ဆို တအားးကို မဲတင်းးပီးးတော့ လက်ကိုင်ကို ကိုင်ရတာပါ!😖😖😖
ဒါပေမဲ့ နောက်က တအားးကို ကပ်လာပါတယ်! နှစ်ယောက်ပူးးနေသလိုပါပဲ! ဒီလောက်ကြပ်နေသလားဆိုပီး ဝေ့ဝဲကြ ည့်တော့လဲ ကိုယ့်အနားသာကြပ်နေတာပါ! အဲတော့မှ Bus ကားမှတ်တိုင်နားမှာ ဝေ့လည်ကြောင်ပတ်လုပ်နေတဲ့ သူမှန်းးသိတော့တာ!အဲဒါနဲ့ အိမြတ်လဲ စပယ်ယာဦးးကို ခေါ်ပီးး ဦးးရေ တခြားနေရာက မကြပ်ပဲ သမီး အနားးကပဲ ပူးကပ်နေသလို ကြပ်နေ တာ နည်းနည်းတော့ တစ်မျိုးပဲလို့အော်လိုက်တော့မှ စပယ်ယာဦးက ဟေ့လူ ခင်ဗျားကလဲ ဟုတ်သားးပဲ ဗျာ>> ဘယ် လိုဖြစ်လို့ ဒီလောက်ကပ်နေတာလဲ ဟိုဘက်တိုးးဗျာဆိုပီး ပြောတော့ ဟိုဘက်လှည့်သွားပါတယ်!သမိုင်းးလမ်းဆုံနားရောက်တော့ မီးပွိုင့်နားမှာ ဆင်းမဲ့သူတွေနဲ့ကြပ်နေတော့ သူက ဒီဘက်ပြန်လှည့်လာပီးး စွာတယ်နော် မထင်ထားဖူး ဆိုပီးး အနောက်ကနေ ဟိုလိုမျိုးးလာလုပ်ရော! အစကတော့ မသိဖူးလူကြပ်နေတာရော! တအားပူနေတာေ ရာ လက်တွေလဲ မအားဆိုတော့! အဲဒါကို သူက ကိုယ် Feel တက်နေတယ်လို့များထင်နေလားမသိဖူး!အဲဒါနဲ့ သူဘာလုပ်မှန်းလဲ သိရော!ရှက်လဲရှက် ရွံလဲရွံ ကိူင်ထားးတဲ့ ထီးးနဲ့ အနောက်ကို ဆောင့်ထိုးပလိုက်တယ်! အဲ့မှာ အားးဆိုပီး အကျယ်ကြီးးပဲ သူအော်ထအော်ရော! ပီးးတော့ အိတ်ကော ဖိုင်ကော ပစ်ချပီးး! ဒီမှာ သမီးးကို မဖွယ်မရာ လု ပ်နေပါတယ်ဆိုပီးး ကိုင်ထားတဲ့ ထီးနဲ့ ဖြောင်းဖြောင်းဖြောင်းဆိုပီး ရိုက်ထည့်လိုက်တာ!
အဲ့မှာ လူတွေက အံ့သြနေကြတုန်းး! သကောင့်သားးက အိမြတ်ကို တွန်းပီးး ကားပေါ်က ခုန်ချသွားရော😐😐😐သမို င်းလမ်းဆုံ မီးပွိုင့်မှာဘာ! အဲ့မှာ ကားဆရာရော စပယ်ယာရော ကားပေါ်က လူတွေ ဆင်းပီး ဘယ်မှာလဲ အဲ့ကော င်ဆိုပီး လိုက်ရှာကြပါတယ်! ဒါပေမဲ့ ဘယ်ရောက်သွားမှန်းးမသိတော့ပါဖူးးး😕😕😕အိမြတ်ထီးးလဲ ကျိုးရော !လူလဲ ဝမ်းနည်းလွန်းလို့ ငိုချလိုက်တယ်! ဘာလုပ်လို့ လုပ်ရရမှန်းလဲ မသိဖူး!😞😞လူလဲ ပျော့ခွေသွားတာပဲ😞😞တကယ်တော့ အိမြတ် ဝတ်ထားတာလဲ ပစ်မှားလောက်စရာ ဝတ်ထားတာမဟုတ်ဖူး!😞 အကွက်လက်ရှည်နဲ့ ဂျင်းဘော င်းဘီရှည် ဝတ်ထားတာ! ဒါတောင် ဒီလို လုပ်ခံရတယ်ဆိုတော့လေ😖😖😖😖မိန်းးမဒေ ဘဝက တကယ်ကို မလုံခြုံတော့ဖူးးး! ဘယ်မှာလဲ မိန်းမသားတွေကို ကာကွယ်မှုတွေ စောင့်ရှောက်မှုတွေ!ဒါလား အားနွဲ့သူ မိန်းမသားတွေကို စောင့်ရှောက်တဲ့ နိုင်ငံ😞😞ဲ ဒီလောက်တောင်ပဲ သားသမီးချင်းကိုယ်ချင်းမ စာနာ နိုင်ကြတော့ဖူးလားဟင်😞😞😞ဘယ်လောက်တောင် တဏှာ ရာဂစိတ်ဒေ မွှန်ထူနေကြတာလဲဟင်? တကယ်တော့ အရမ်းရှက်ပါတယ် ။ ရှက်ပေမဲ့ မိန်းးခေးတွေ ဒီလိုဖြစ်ရင် ငြိမ်မခံပဲ ပြန်လုပ်ကြပါ! အော်ကြပါ! အကူအညီတောင်းးကြပါ! ရှက်ပီး ငြိမ်မနေပါနဲ့”တကယ်တော့ ဒီစာရေးးရတာ လက်တွေလဲ တုန် မျက်ရည်တွေတောင် ကျပါတယ်! တစ်ခါမှ မဖြစ်ဖူးးဖူးး ဒီလိုမျိုးး! ကိုယ့်ကိုကို ရှက်လဲရှက် ဒေါသလဲထွက်! သနားလဲ သနားး!
Emily Su Mon
နားနဲ့ မနာ ဖဝါးနဲ့ နာစလေိုပါတယျ! ဒီနေ့ အိမွတျ Baahubali ကို စံရိပျငျွမျ ဂမုနျးးပှငျ့မှာ ကွညျ့ပီးး အပွနျမှာ! စံရိပျငွိမျ မှတျတိုငျမှာ Bus Car စောငျ့နပေါတယျ ။ အရငျက ကြောငျးဆငျးရငျ ဖဖေလောကွိုပမေဲ့ ဒီနတေ့ော့ လြှာရှညျပီး ကိုယျ့ ဘာသာ ပွနျမယျဆိုပီးး Bus ကားစောငျ့နပေါတယျ!အဲ့မှာ လူတယောကျက အနောကျကပါလာတယျ!လူပုံက သနျ့သနျ့ပါပဲ! အသကျတော့ 30 လောကျရှိမယျထငျပါတယျ! ကိုယျကတော့ ကားစောငျ့နတေဲ့ သူထငျပီး ကားးပဲ မြှျောနတော!သူ့ကိုလဲ သတိမထားမိပါဖူး!ကားကလဲ တျောတျောနဲ့မလာတော့4ခှဲလောကျမှ ကားရပါတယျ! အဲ့မှာ အိမွတျက ကားပျေါတကျပီးး ကိုယျက ခုံရ တာ မို့ အေးအေးဆေးဆေးပါပဲ!အဲ့လူပါလာတာလဲ သတိမထားမိပါဖူးး! ဘူတာရုံလမျးးနားကတြော့ ကလေး အမသေားးအမိ တကျလာပါတယျ! လူတှကေ ကပျြ နရောကမရမို့! အိမွတျက နရောက ဖယျပေးလိုကျပါတယျ!ကိုယျကလဲ အိတျက တဈဖကျ ဖိုငျကတဈဖကျ ထီးကတဈဖကျမို့! ကိုယျ့အနောကျက ကပျနတော ယောကျြားလား မိနျးး မလားလဲ မသိပါဖူးး ကိုယျက လေးဖကျနာဖွဈကတညျးးက လကျက မသနျတာမို့ အပျေါက တနျးးကို ကိုငျရငျလဲ မမွဲပါဖူး! 😞 ဒါကွောငျ့ မှတျတိုငျတဈခုရပျမယျဆို တအားးကို မဲတငျးးပီးးတော့ လကျကိုငျကို ကိုငျရတာပါ!😖😖😖
ဒါပမေဲ့ နောကျက တအားးကို ကပျလာပါတယျ! နှဈယောကျပူးးနသေလိုပါပဲ! ဒီလောကျကွပျနသေလားဆိုပီး ဝဝေဲ့ကွ ညျ့တော့လဲ ကိုယျ့အနားသာကွပျနတောပါ! အဲတော့မှ Bus ကားမှတျတိုငျနားမှာ ဝလေ့ညျကွောငျပတျလုပျနတေဲ့ သူမှနျးးသိတော့တာ!အဲဒါနဲ့ အိမွတျလဲ စပယျယာဦးးကို ချေါပီးး ဦးးရေ တခွားနရောက မကွပျပဲ သမီး အနားးကပဲ ပူးကပျနသေလို ကွပျနေ တာ နညျးနညျးတော့ တဈမြိုးပဲလို့အျောလိုကျတော့မှ စပယျယာဦးက ဟလေူ့ ခငျဗြားကလဲ ဟုတျသားးပဲ ဗြာ>> ဘယျ လိုဖွဈလို့ ဒီလောကျကပျနတောလဲ ဟိုဘကျတိုးးဗြာဆိုပီး ပွောတော့ ဟိုဘကျလှညျ့သှားပါတယျ!သမိုငျးးလမျးဆုံနားရောကျတော့ မီးပှိုငျ့နားမှာ ဆငျးမဲ့သူတှနေဲ့ကွပျနတေော့ သူက ဒီဘကျပွနျလှညျ့လာပီးး စှာတယျနျော မထငျထားဖူး ဆိုပီးး အနောကျကနေ ဟိုလိုမြိုးးလာလုပျရော! အစကတော့ မသိဖူးလူကွပျနတောရော! တအားပူနတောေ ရာ လကျတှလေဲ မအားဆိုတော့! အဲဒါကို သူက ကိုယျ Feel တကျနတေယျလို့မြားထငျနလေားမသိဖူး!အဲဒါနဲ့ သူဘာလုပျမှနျးလဲ သိရော!ရှကျလဲရှကျ ရှံလဲရှံ ကိူငျထားးတဲ့ ထီးးနဲ့ အနောကျကို ဆောငျ့ထိုးပလိုကျတယျ! အဲ့မှာ အားးဆိုပီး အကယျြကွီးးပဲ သူအျောထအျောရော! ပီးးတော့ အိတျကော ဖိုငျကော ပဈခပြီးး! ဒီမှာ သမီးးကို မဖှယျမရာ လု ပျနပေါတယျဆိုပီးး ကိုငျထားတဲ့ ထီးနဲ့ ဖွောငျးဖွောငျးဖွောငျးဆိုပီး ရိုကျထညျ့လိုကျတာ!
အဲ့မှာ လူတှကေ အံ့သွနကွေတုနျးး! သကောငျ့သားးက အိမွတျကို တှနျးပီးး ကားပျေါက ခုနျခသြှားရော😐😐😐သမို ငျးလမျးဆုံ မီးပှိုငျ့မှာဘာ! အဲ့မှာ ကားဆရာရော စပယျယာရော ကားပျေါက လူတှေ ဆငျးပီး ဘယျမှာလဲ အဲ့ကော ငျဆိုပီး လိုကျရှာကွပါတယျ! ဒါပမေဲ့ ဘယျရောကျသှားမှနျးးမသိတော့ပါဖူးးး😕😕😕အိမွတျထီးးလဲ ကြိုးရော !လူလဲ ဝမျးနညျးလှနျးလို့ ငိုခလြိုကျတယျ! ဘာလုပျလို့ လုပျရရမှနျးလဲ မသိဖူး!😞😞လူလဲ ပြော့ခှသှေားတာပဲ😞😞တကယျတော့ အိမွတျ ဝတျထားတာလဲ ပဈမှားလောကျစရာ ဝတျထားတာမဟုတျဖူး!😞 အကှကျလကျရှညျနဲ့ ဂငျြးဘော ငျးဘီရှညျ ဝတျထားတာ! ဒါတောငျ ဒီလို လုပျခံရတယျဆိုတော့လေ😖😖😖😖မိနျးးမဒေ ဘဝက တကယျကို မလုံခွုံတော့ဖူးးး! ဘယျမှာလဲ မိနျးမသားတှကေို ကာကှယျမှုတှေ စောငျ့ရှောကျမှုတှေ!ဒါလား အားနှဲ့သူ မိနျးမသားတှကေို စောငျ့ရှောကျတဲ့ နိုငျငံ😞😞ဲ ဒီလောကျတောငျပဲ သားသမီးခငျြးကိုယျခငျြးမ စာနာ နိုငျကွတော့ဖူးလားဟငျ😞😞😞ဘယျလောကျတောငျ တဏှာ ရာဂစိတျဒေ မှနျထူနကွေတာလဲဟငျ? တကယျတော့ အရမျးရှကျပါတယျ ။ ရှကျပမေဲ့ မိနျးးခေးတှေ ဒီလိုဖွဈရငျ ငွိမျမခံပဲ ပွနျလုပျကွပါ! အျောကွပါ! အကူအညီတောငျးးကွပါ! ရှကျပီး ငွိမျမနပေါနဲ့”တကယျတော့ ဒီစာရေးးရတာ လကျတှလေဲ တုနျ မကျြရညျတှတေောငျ ကပြါတယျ! တဈခါမှ မဖွဈဖူးးဖူးး ဒီလိုမြိုးး! ကိုယျ့ကိုကို ရှကျလဲရှကျ ဒေါသလဲထှကျ! သနားလဲ သနားး!